Global Voices teny Malagasy » Tantara nomerika mitantara ny herisetra nihatra tamin’ny Shinoa nandritra ny fitroarana tamin’ny taona 1998 tao Indonezia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jona 2018 5:48 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Aostralia, Indonezia, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Milaza ny tantaran'ny Shinoa Indoneziana izay nisy nanafika nandritra ny fitroarana nahatonga ny fionganan'ny governemanta Indoneziana tamin'ny taona 1998 ny tantara voaravaka antsary nomerika.
Tamin'ny volana Mey 1998, nisy korontana mahery vaika nanerana an'i Indonezia, nitaky ny fametraham-pialan'ny Filoha Suharto izay nitondra ny firenena nandritra ny telopolo taona mahery. Nitarika fanovana teo amin'ny governemanta ny fitroarana saingy sivily tsy manan-tsiny an'arivony, indrindra indrindra fa ireo indoneziana razambe Sinoa no naratra, naolana sy novonoina. Nandositra ny firenena noho ny herisetra mihamitombo izay nikendry azy ireo ny Orang Tionghoa (izay iantsona ny indoneziana manana razambe Shinoa feno na ampahany).
Nanambara ny tatitry  ny governemanta nivoaka tamin'ny Oktobra 1998 fa, raha toa ka nisy fotoana nahitana herisetra tamin'ny Indoneziana Shinoa, toa nomanin'ny jiolahim-boto eo an-toerana notohanan'ny hery matanjaka ara-politika sy ny tafika miaramila ny ankamaroan'ny tranga. Nandrakitra tranga fanolanana izay nihatra tamin'ireo vehivavy Shinoa Indoneziana ihany koa ny tatitra.
Roapolo taona taty aoriana, manohy mitady  ny rariny ireo olona niharan'ny fanafihana tamin'ny taona 1998 sy ny fianakavian'izy ireo.
Nosoratan'ny mpanakanto iray avy ao Melbourne antsoina hoe Rani Pramesti ny tantara voaravaka an-tsary ‘Bitsibitsiky ny Shinoa’  izay mitantara ny loza nanery azy handositra ny firenena malalany tamin'ny taona 1998. Misy ihany koa ny tantaran'ireo vehivavy nanatri-maso ny rotaka tamin'ny taona 1998.
Niresaka taminy mikasika ny tantara sy ny antony nanosika azy hanomboka ity tetikasa ity ny Global Voices:
Ny Bitsibitsiky ny Shinoa dia aingam-panahy avy amin'ny zava-niainako manokana momba ny fiantraikan'ny herisetra ara-poko teo amin'ny fahatsapako amin'ny mari-panondroana ahy sy ny zava-misy ara-tantara tamin'ny May 1998.
Nahatsikaritra aho fa lasa (anisany) olana goavana tsy resahina intsony eo amin'ny Shinoa Indoneziana any Aostralia ny taona 1998.
Tsy afaka miresaka ny zavatra niainan'ny olon-kafa aho. Saingy afaka miresaka momba ahy. Tsy tratry ny fandrobàna, fanolanana, sy herisetra tamin'ny taona 1998 izaho sy ny fianakaviako, saingy niaina ny vanim-potoana izay niharan'ny fanavakavahana ara-politika izahay. Satria notezaina ho Indoneziana tanteraka, rehareha iray izay, nampanontany tena tamin'ny mari-panondroako ahy tamin'ny rotaky ny taona 1998.
Amin'ny alalan'ny Bitsibitsiky ny Shinoa, te-hanambara izay mety ho vitan'ny fanavakavaham-bolonkoditra nateraky ny politika (PMR) tamin'ny olona aho, ​​(ary) tsy mampaninona hoe firy taona maro taorian'ny nitrangan'izany. Nisy fiantraikany goavana tamin'ny mahaolombelona ny PMR, saingy tsy tany Indonezia ihany fa manerana izao tontolo izao amin'izao fotoana.
Nohazavainy ny antony nisafidianany ny lohateny hoe ‘Bitsibitsiky ny Shinoa’ ​​tamin'ny tantara nosoratany:
Nandritra ny fizotry ny famoronana niaraka tamin'ny fiarahamonina, niresaka zavatra maro sy ny zava-drehetra izahay. Na izany aza, rehefa namoaka ny zava-nitranga tamin'ny 1998 aho, mikasika ny toerana misy anay sy ny hafa, nanjary niova ho bitsibitsika ny feo tao an'efitra.
Amin'ny maha mpianatra zavakanto mampihetsi-po ahy, nianatra ny fandiniham-peo, ny fihetsika rehefa miteny, sy ny fitenenana aho. Ny zavatra hitako nandritra ny fivoriana sy ny atrikasa nampihetsi-po, dia nisy dikany ho an'ny fiarahamonina ny taona 1998.
Maro no nilaza fa zavatra fady resahana ny fitroarana tamin'ny taona 1998. Mijanona ho saro-pady izany, sarotra ny miresaka momba ny zava-nitranga saingy tsy voambolana hanasokajiana azy ny fady.
Ary ity no antenainy hotanterahan'ny asany:
Indray andro aho nanatrika ny famakiana poezia nosoratan'i Mark Gonzales, ny iray amin'ireo tononkalony dia mivaky hoe: “Tsy afaka manasitrana izay tsy ho hitantsika isika.” Hitako ho marina izany.
20 taona lasa izay, zara raha fantatra ny taona 1998. Misy zavatra maro tokony hatao eo amin'ny lafiny fanasitranana, mba hahazoana karazana rariny. Tsy miresaka momba ny fanasitranana amin'ny ambaratongan'ny tsirairay manokana ihany aho, fa amin'ny maha-firenena.
Tiako ny hahatsiarovan'ny mpamaky ny zava-nitranga tamin'ny taona 1998 sy hihetsi-po noho ny zava-niainan'ny tsirairay nandalo izany.
Ao amin'ny asako, ny faha-12 taona niainako no namotipotehin'ny fanavakavaham-bolonkoditra nateraky ny politika ny mari-panondroana azy.
Tiako ny fandraisan'anjaran'ny zavakanto mampihetsi-po amin'ny fitantaràna ny tantarako manokana. Na izany na tsy izany, na dia eo aza ireo tantara goavana henontsika na avy aiza na avy aiza, olombelona foana isika rehetra, manana ny tantara kelintsika isika ary izany no fomba ifandraisantsika amin'ny ambaratonga lalina indrindra – avy amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa.
Iray amin'ireo pejin'ny Bitsibitsiky ny Shinoa. Nahazoana alalana. One of the pages of the Chinese Whispers. Used with permission.
Amin'izao fotoana izao, misy amin'ny teny Indonezianina ny Bitsibitsiky ny Shinoa. Hivoaka amin'ny faran'ny taona 2018 ny dikanteny Anglisy. Azo jerena ao amin'ny tranonkalany  ny asan'i Rani ary azo jerena amin'ny alàlan'ny pejiny  Facebook sy Instagram ihany koa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/20/121466/
 ‘Bitsibitsiky ny Shinoa’: https://thechinesewhispers.com/
 Instagram : https://www.instagram.com/ranipnews/